Imibhalo kaBill English on Martech Zone |
Imibhalo nge UBill English
UMthethosivivinywa (@syabongampungos) uyinhloko yokuklama ku- Efanelekayo futhi ubelokhu enza ubuciko kumakhompyutha kusukela ezinsukwini ze-Amiga 500. I-Intanethi kanye nesiphequluli sewebhu samvumela ukuthi ekugcineni ahlanganise izintshisekelo zempilo yonke ekwakhiweni kwemidwebo nobuciko obulandelanayo ngokuthakazelisa kwakhe ubuchwepheshe nohlelo. Izenzo zokuzilibazisa zikaBill zifaka amahlaya eMarvel, iGuitar Hero, nokubuka ama-podcast ngama-movie. Iningi lesikhathi sakhe sokuklama sikhuthazwa ngamanani amaningi eDiet Coke. Njengamanje uhlala eWestfield, IN, nonkosikazi wakhe omangalisayo, uNicole, nendodana yakhe emangalisayo, uVan.
Imihlahlandlela Emine Yokuqukethwe Kwewebhu Okufundekayo
ULwesihlanu, February 19, 2010 NgeSonto, ngoJuni 28, i-2015 UBill English
Ukufundeka ngamandla lapho umuntu angafunda khona umbhalo othile futhi aqonde futhi akhumbule lokho asanda kukufunda. Nawa amanye amathiphu wokuthuthukisa ukufundeka, ukwethulwa, nokuvezwa kokubhala kwakho kuwebhu. 1. Ukubhalela Ukufundwa Kwewebhu kuwebhu akulula. Abaqaphi bekhompyutha banesinqumo esiphansi sesikrini, futhi ukukhanya kwabo okuvezwayo ngokushesha kwenza amehlo ethu akhathale. Futhi, amawebhusayithi amaningi nezinhlelo zokusebenza zakhiwa ngabantu